Ubeka njani ikoma ngokuchanekileyo, isikhokelo esisebenzayo nesilula | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Ababhali, Iincwadi, Ezahlukeneyo
Ikoma isindisa ubomi
Ubeka njani ikoma ngokuchanekileyo kubalulekile ukuze ubhale (kwaye ufunde) ukubhala ngokufanelekileyo. Ngaphandle kwabo, ukufundwa kwezicatshulwa bekuya kuthi tyaba ngokupheleleyo kwaye, ke ngoko, kusilele nasiphi na isingqisho okanye ubuchule bokulungiselela ukuqonda kwabo. Umgaqo omiselweyo wokusetyenziswa kwayo zezi zinto zilandelayo: isiphumlisi kufuneka sibhalwe kwangoko emva kwegama okanye uphawu lwangaphambili.
Emva koko, indawo kufuneka ishiywe phakathi kwekoma kunye negama, uphawu okanye inombolo eqhubeka nomxholo. Ngokuyintloko, iikoma zisetyenziselwa ukubonisa ikhefu elifutshane ngokubhala. Ezo zikhefu zifutshane embindini wokufunda zincinci kunezo ziboniswe lixesha (.).
1 Ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe malunga neekoma
2 Ubeka njani ikoma ngokuchanekileyo kwisicatshulwa
2.1 Yitya ngomsebenzi wokuthetha
2.2 Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwekoma
2.3 Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwe-comma echazayo okanye ehambelana nayo
2.4 Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwekoma elliptical
2.5 Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwe-coma esebenzayo
2.6 Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwekhoma ngokudibeneyo
2.7 Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwe-coma hyperbatic
3 Olunye usetyenziso lwe comma
3.1 Njengomahluli wokugqibela
3.1.1 U mzekelo
3.2 Kwiilwimi zokuprograma
Ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe malunga neekoma
Ikoma "inamandla" okutshintsha ngokupheleleyo intsingiselo yesivakalisi, nokuba ibonisa ukulandelelana okufanayo kwamagama. Owona mzekelo uqheleke kakhulu uvela ngezichazi kunye nendlela onokujika ngayo iqela lezifundo liphelele. Umzekelo:
Abafundi abanomdla bayigqiba imithambo yeerobic.
Abafundi abanomdla bayigqibile imithambo ye-aerobic.
Kumgca wokuqala, bonke abafundi bagqibe imithambo yeerobic kwaye bonke babenomdla. Kwingxelo yesibini, kuphela abo babenomdla wokugqiba imithambo. Omnye umzekelo weklasikhi "yikoma esindisa ubomi", njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Ngenani kwisidlo sangokuhlwa, bantwana.
Ngenani kwisidlo sangoku ngoku, bantwana.
Ubeka njani ikoma ngokuchanekileyo kwisicatshulwa
Kwimizekelo emibini edlulileyo- kuyacaca ukuba indlela echanekileyo yokubhala isivakalisi sesesibini. (Ngaphandle kokuba ngumyalelo okhohlakeleyo okanye isicatshulwa esivela kwimbali eyoyikisayo). Ngesi sizathu, xa umntu ebhala isicatshulwa, kufuneka bacacelwe malunga neekoma zokuzibeka kwindawo ehambelana nenjongo yabo.
Yitya ngomsebenzi wokuthetha
Isiphumlisi kunye nomsebenzi.
Kufuneka ikhunjulwe into yokuba ilizwi liyindlela yokwalatha okanye yokujongana nomntu okanye abantu abaninzi ngegama okanye ngegama elithile. Ke, ikoma isetyenziswe ngokufanelekileyo ibalaselisa ubuchule besivakalisi (nokuba sithini isenzi-isivakalisi ngokulandelelana). Umzekelo:
Mario, yehla uye kwisikhululo sikaloliwe esingaphantsi komhlaba ngentsimbi ye-9.
Abaphumelele kwisikolo samabanga aphakamileyo, yonke imithombo yolwazi abayibeka kuyo kufuneka ibonakalisiwe
Lixesha lesidlo sasemini, Carolina, hlamba izandla zakho ngesepha namanzi.
UNilsa, umfazi othanda ukufunda UNeruda.
UFrida, kudala, ukhule njani!
Bathandi, imvumi ifikile, hlala ezihlalweni zakho.
Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwekoma
Ikoma yokubala isetyenziselwa ukwahlula onke amalungu eqela lezinto ezineempawu ezifanayo okanye iimpawu ezifanayo. Olu hlobo lwesiphumlisi lukwaluncedo ekwenzeni ulandelelwano kwaye, ngesiqhelo, la magama akhatshwa zizihlanganisi (ezingenazo ikoma phambi kwazo). Umzekelo:
UNks Carmen uthengisa izihlangu, iimbadada, iibhegi, iziqholo kunye neemveliso zempilo kwivenkile yakhe. (Lungile).
UNksk. Carmen uthengisa izihlangu, iimbadada, iibhegi, iziqholo, kunye nemveliso yezempilo kwivenkile yakhe. (Ayilunganga).
I-Basketball, ibhola ekhatywayo, kunye nokudada ziyimidlalo enzima kakhulu. (Lungile).
I-Basketball, ibhola ekhatywayo, kunye nokudada ziyimidlalo enzima kakhulu. (Ayilunganga).
Iincwadi zalo mbhali zinomdla, zinamandla, kwaye zigcwele ukumangalisa.
Ndiyakuthanda ukuya kweli lizwe kuba ndiyakwazi ukuphefumla umoya ococekileyo, ukuva ingca, ukuva iintaka zicula, kwaye ndilala ngaphandle kwengxolo yesixeko esikhulu.
Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwe-comma echazayo okanye ehambelana nayo
Xa kusetyenziswe isiphumlisi, isigwebo kufuneka senziwe ngekoma ekuqaleni nasekupheleni. Olu hlobo lwesiphumlisi lusetyenziselwa ukongeza ulwazi olongezelelekileyo- olungabalulekanga, ke ngoko, lunokususwa ngaphandle kwengxaki- malunga nomntu okanye into echaziweyo (umxholo) okanye isenzo (isenzi). Nangona, nangaliphi na ixesha idatha eyongezelelweyo inokuguqula intsingiselo yesivakalisi.
U-López, ngaphandle kokuba yimbaleki ebalaseleyo, ungumdanisi olungileyo. (Kungabhalwa: uLópez ngumdanisi olungileyo).
UMariana noEduardo bafika eofisini, nangona kwakubanda. (Kungabhalwa: UMariana no-Eduardo bafika kwangethuba e-ofisini).
Ifowuni yam, nangona ingesiso isizukulwana sakutshanje, ithatha iifoto zenkcazo ezigqwesileyo. (Ingabhalwa: Ifowuni yam ithatha iifoto zenkcazo ebalaseleyo)
Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwekoma elliptical
Ukusetyenziswa okufanelekileyo kolu hlobo lwe-comma kukutshintsha indawo yesenzi esichazwe ngaphambili kunye / okanye isibizo. Ngesi sizathu, ikoma elliptical isetyenziswa njengesixhobo esifanelekileyo ukuthintela ukusilela ekubuyiseleni kwakhona kunye Xhasa indlela yokubhala. Umzekelo:
UMarcos wagubungela utshintsho lwakusasa kunye no-Aureliano, utshintsho lwasebusuku. (Isiphumlisi emva ko "Aureliano" sithathe indawo yecandelo "ligqume ithuba").
URoberta wathenga ikhamera; UMario, ezinye iiglasi. (Isiphumlisi emva ko "Mario" sithathe indawo "yokuthenga").
UManuel wayekhangela ukuzola; Ignacio, kumnandi. (Isiphumlisi emva ko "Peter" sithathe indawo "yokukhangela").
Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwe-coma esebenzayo
Olu hlobo lwesiphumlisi lusetyenziswa xa isifundo saziwa ngelinye igama okanye alias. Eli pseudonym kufuneka lifakwe ngaphakathi kwiziphumlisi. Umzekelo:
UGiannis, isimanga sesiGrike, waphumelela eyona mbasa yomdlali oxabisekileyo ye-NBA yowama-2020.
I-Nubia, umdwelisi weenkqubo, uyasebenza kakhulu ekupheliseni ukuvuza kwinethiwekhi.
U-Antonio Rubiales, umbhali, wagxeka kabukhali umongameli weklabhu yencwadi.
Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwekhoma ngokudibeneyo
Ikoma edibeneyo iyimfuneko xa kwisivakalisi kukho ikhefu kunye nebinzana lesichazi okanye izihlanganisi. Indlela efanelekileyo yokuyibeka emva kwekhonkco ekhoyo kwisivakalisi. Ezona ntetho ziqhelekileyo kwezi meko zezi zilandelayo:
Eminye imizekelo inokubonwa ngezantsi:
Kwiveki ephelileyo ndiyigqibile yonke indlela, nangona kunjalo ibingumbhodamo.
Ngomso ezona bhanti zibalaseleyo ziya kudlala, oko kukuthi, abantu abaninzi baya kuza.
Kwi-basketball kufuneka uziqhelanise nokuqhuba kuqala.
Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwe-coma hyperbatic
Kule meko, ikoma kufuneka ibekwe emva komsitho okanye umsitho. Ewe, ikhoma (hyperbatic comma) isetyenziselwa ukuguqula imeko yesiqhelo yesigwebo (ukulandelelana, intloko, isenzi kunye nesivisa). Ngokunjalo, kuyasebenza ukuqinisekisa isenzo phakathi kweemeko ezithile. Umzekelo: -Ngokwexabiso lenkampani yethu, uJosé ufanelwe kukwamkelwa ngumntu wonke.
Ngaphandle kokunqongophala kwemali, iprojekthi yenziwa ngempumelelo.
Ngelixa sisemva, kufuneka sihlale sigxile kwinjongo zethu.
Olunye usetyenziso lwe comma
Kwimathematika, onke amaxabiso edesimali andulela ikoma. Ke ngoko, iyasebenza ukwahlula amanani apheleleyo kumanani edesimali. Kwelinye icala, kwamanye amazwe ixesha lisetyenziselwa le njongo endaweni yekoma. (Zombini ikoma kunye nexesha zisemthethweni kwiRAE).
Ikoma ekusetyenzisweni kwekhompyutha isetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, ihlala isetyenziselwa ukwahlula amaxabiso okanye ukumisela uluhlu lwento enye okanye ezingaphezulu. Ngendlela efanayo, isebenza ukubonisa izinto zefomyula okanye umyalelo.
[Kwi (a, b)] (umsebenzi).
[int a, b, sum] (isibhengezo sezinto eziguquguqukayo).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ubeka njani ikoma ngokuchanekileyo
ULuis Felipe Ortiz Reyes sitsho
Kumnandi kakhulu ukufumana ulwazi njengoko lunjalo, kuhlala kunceda ukulungisa iimpazamo okanye ukubhala iinkcukacha.
UEnrique Nava sitsho
Ulwazi olugqwesileyo, enkosi.
Phendula u-Enrique Nava
IGuadalupe Grande. 4 yemibongo yakhe kwimemori yakhe